Google na-arụ ọrụ iji mee ka Chrome nwekwuo nchebe na Mac | Esi m mac
Google na-arụ ọrụ iji mee ka Chrome nwekwuo nchebe na Mac
Taa anyị na-enweta a akụkọ na-atọ ụtọ site na onye isi aka nke ụlọ ọrụ apụl. Google melite nche nke ihe nchọgharị gị na Chrome maka Mac ngwaọrụ. Dị ka ọ na-eme ruo oge ụfọdụ maka ọnụ na sistemụ arụmọrụ Windows, Google ugbu a na-ekwuwapụta na ọ ga-emekwa ka ngwa ya maka kọmputa Mac sie ike.
Akụkọ a biara Mgbe ozi pụtara izu gara aga na mgbasa ozi dị iche iche nke mmụba a tụrụ anya na malware maka ngwaọrụ Mac afọ a 2017.
Google na-eme mgbanwe na ihe nchọgharị gị maka nhazi ahụ ogologo oge Windows, na ugbu a ezube ime otu ihe ahụ n'ihi na ya Apple desktọọpụ n'elu ikpo okwu, si otú a na-eme mgbalị itule nche nke ngwa gị na ndabara onye na macOS, Safari.
Maka nke a, Google nwere maapụ ụzọ ụzọ: mbụ ọ ga-abụ ntọala API Chrome maka Mac na nke abụọ ọ ga-abụ usoro nchekwa nchekwa, na-agwa onye ọrụ mgbe ịnweta ma ọ bụ na-anwa ịnweta ibe nwere ike imebi.
Ntọala API ga-enye ndị ọrụ njikwa njikwa ihe nchọgharị ha. N'ọdịnihu, API a ga - abụ naanị onye nwere ikikere iji gbanwee nhazi dị otú ahụ, na-egbochi ndọtị ndị ọzọ ịnweta ntọala ndị a, dị ka ọ dị ugbu a na nyiwe Windows.
N'etiti ntọala nche nke a ga-etinye n'ọrụ, ọ gụnyere igbochi ngwa ndị na-emerụ ahụ nke na-anwa ịmezi peeji nke ihe nchọgharị ahụ, ndị na-ewebata mgbasa ozi na nsogbu ndị ọzọ dị iche iche. Usoro ohuru a bu ihe n’atu oru site na onwa a.
Obi abụọ adịghị ya, ihe niile na-eme ka ihe nchọgharị ka mma ma na-eme ka ọ dị nchebe na-agụnyekwa udo nke uche mgbe ị na-achọ ntanetị. Anabata bụ ngwa ọrụ niile na - eme ka nchebe anyị na - eme nchọgharị na ịntanetị nakwa ihe niile na-enyere anyị aka ịmata ihe egwu anyị na-ewere mgbe anyị banyere webusaiti nwere ike dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Google na-arụ ọrụ iji mee ka Chrome nwekwuo nchebe na Mac
TrailRunner mini na-agbanwe na usoro ndebanye aha kwa afọ
Ngwa kachasị mma ile ihe nkiri na usoro na Apple TV 4